Saciid Siyaad Shirwac oo Qoraal Soo Gaarsiiyey SomaliTalk
Qoraalka hoos ku qoran waxa SomaliTalk soo gaarsiiyey Saciid Siyaad Shirwac, waxa uuna wax ka qoray sida ay la tahay xalka soomaaliya.
Khaladkii ka dhacay Carta yaan midkale lagu darin.
Saciid Siyaad Shirwac.
Xoghayahay Xuseen Caydiid.
Sida lawada ogsoonyahay dhowr jeer ayaa laysku deyey in la damiyo dabkaan holaca wayn leh ee ka holcaya dalka Somaliya hasa yeeshee waxaa nasiib daro ah in kasta oo ay rajadu soo dhawaato ay soo If baxayaan debendaabo iyo caqabado looga dan lahaa in la hor istaago wixii wanaag ah oo u qabsoomi lahaa shacbiga Somaaliyeed.
Shirarkaas tixanaha ah ee dhicisoobay waxaa inta badan eedeeda la saari karaa dowlado shisheeye walow shaqsiyaad kala duwan oo Somali ah aanay dani ka gelin dhibka haysta shacbiga Somaaliyeed kuwaasoo markasta u heelan ka shaqaynta danaha shisheeye.
Suurta gal maaha mana la rumaysan karo in shaqsiyaad dareen Somaalinimo leh oo ka dhiidhiya dhibaatada haysata shacbigooda ay goob shir ah isugu yimaadaan isla markaana haleeli waayaan xal dhab ah oo lagu soo af jaro dagaalka sokeeye ee gaamuray hasa yeeshee waxaa meesha ka cad in aan weli la tixgelin danta guud ee ummadda Somaaliyeed balse loo loolamayo dano gaara oo raqiis ah oo laga yaabo in ay shaqsiga taariikhda danbe ka xumayso.
Waxaa nasiib darro ah in shirkii uu ku baaqay Ismaaciil Cumar Geele shacbiguna rajada ka qabay, qabanqaabadiisa iyo maarayntiisa la jaah-wareeriyo loona weeciyo qaab danley khaas ah lagu naas nuujiyo ujeedo gaar ahna laga lahaa sababtoo ah ka qaybgalayaashii shirka oo aan lagu soo xulin qaab (criteria) aan u cuntamin shacbiga Somaliyeed, hogaamiyaasha siyaasada iyo beesha caalamkaba.
Qaabka looga qayb galay Carta wuxuu ahaa jaantaa- rogan iyo kala dhuumasho ayadoo aan loo eegin ayaa mudan ayaa wax matala iyo ayaa leh go’aan siyaasadeed iyo mid beeleed midna waayo hogaamiye dhaqameedyadii shirkaa ka qaygalay inta badan waa la qalday oo mid kasta waxaa loogu baaqay ticket diyaaradeed oo deg-deg ah lamana siin fursad ay kula shiraan beelahooda.
Sida la ogsoon yahay meelaha dagaalada sokeeye ka dhacaan aduunka waxaa dib u hishiisiin loo sameeyaa jabhadaha iyo siyaasiinta ku dagaalama masuuliyada dalkaas. Waxaase fadeexo ah in aan diiwaan geliney taariikh cusub oo khaldan taasoo aan laga aqoon aduunweynaha kale waxaan tani ula jeedaa in shirkii Carta loo diiday in ay ka qaybgalaan hogaamiyaashii qoryaha isu haystay iyo siyaasiyiin badan oo wax soo kordhin karay.
Kacdoonkii jabhaduhu hogaaminayeen ee lagu riday dowladii hore 1991 hadafkiisu waxa uu ahaa in lala dagaalamo oo la rido kaligi taliye aan u cuntamin shacbiga Somaliyeed waxa lagu guulaystay ridista waxaase la yaab leh in waxyaabihii lagu soo dhoodhoobay Carta qorshaha ka danbeeya in uu ahaa in dib loo soo celiyo madaxdii kaligii taliyihii hore ee xukunka laga riday.
Waxaan idin xasuusin lahaa in tartamayaashii shirkii Carta ay ahaayeen gedigood wasiiradii kaligi taliyaha marka laga reebo 2 ama 3 nin. Waxaa is weydiin leh maxaa loola dagaalamay Maxe’d Siyaad Barre? maxayse dagaalkaas ugu naf waayeen shacbi somaaliyeed oo fara badan hadiiba dib loo soo celinayey ku xigeenkii wasiirkii koowaad (prime minister) ee dowladii la riday?
Si loo helo nabad waarta loona soo celiyo sharaftii iyo karaamadii umadda Somaaliyeed ku lahayd beesha caalamka, loona dhiso dowlad qaran oo loo dhan yahay waxaan u soo jeedin lahaa qabanqaabiyaasha shirka Nairobi talooyinkaan wax ku oolka ah si looga foojignaado khaladaadkii shirkii Carta.
1- In qaabka ka qaybgalayaasha lagu saleeyo ururada dhabta ah ee la aqoonsan yahay
2- In beeshii qaab beeleed uga soo qayb galaysa shirka ay soo dirsato dad wata saxiixa . iyo ogolaanshaha waxgaradka iyo kuwa hubaysan ee beesha uu matalayo.
3- In laga tanaasulo oraahda (Others) oo ah hadal quureed aan u cuntamin beel Somaaliyeed.
4- In ka qaygalayaasha idman ee matalaya umadda Somaliyeed marka horaba dhamaan saxiix laga qaado In ay diyaar u yihiin wixii hashiis ah ee ka soo baxa shirka.
5- In beesha caalamka laga codsado dabagalka iyo meelmarinta wixii hashiis ah ee ka soo baxa shirka.
6- in beesha caalamku diyaariso ciidan Somaliya hubka ka dhiga kaas oo ay ka mid yihiin aduunka oo dhan intii suura gal ah.
7- in gargaarayaasha aduunka laga codsado in ay gargaar bixiyaan inta Somaliya cagaheeda isku taagayso.
N.B Waxaan ka afeefanayaa in aan qoraalkaan danta aan ka leeyahay ay tahay samata bixinta umadda Somaaliyeed ee aanan ku xumaynayn beel,urur, ama shaqsi gaar ah.
Saciid Siyaad Shirwac